Feno 20 taona: hanolotra seho goavana ny Ba re a | NewsMada
Feno 20 taona: hanolotra seho goavana ny Ba re a
Antoko mpihira eo anivon’ny fiangonana FJKM Ambohitsoa Fibebahana Atsimondrano ny Ba re a, na ny Balsama ho an’izay reraka am-po. Feno 20 taona katroka amin’ity taona ity ny nijoroany. Tsy handalo fotsiny izany tsingerin-taona lehibe izany fa homarihina amin’ny fampisehoana hira ara-pilazantsara, ao Antsahamanitra, ny asabotsy 27 oktobra izao, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro.
Ity fotoana ity ny ivon’ny fanamarihana ny tsingerin-taona raha toa ka tsy hifarana izany raha tsy amin’io volana desambra io. Mazava ho azy fa handray anjara betsaka amin’io fampisehoana io ny antoko mpihira Ba re a, araka ny voalazan-dRandriananja Carlos Renaldo, mpitarika. Hisy koa anefa ny vahiny maromaro, hasaina manokana hanotrona ny antoko mpihira sy hitory ny filazantsara an-kira. Anisan’izany, i Farakely sy i Joselito, samy efa mpikambana tao amin’ity antoko mpihira ity, ary ny TGC.
Ankoatra ny seho, hanamarika ity fotoan-dehibe ho an’ny antoko mpihira ao amin’ny FJKM Ambohitsoa Fibebahana Atsimondrano ity koa ny famoahany ny rakikira faharoa, mitondra ny lohateny hoe “Tiany ianao”. Ity ny tsangam-baton’ny faha-20 taonan’ny Ba re a. Fanampin’izany, hatolotr’izy ireo ho an’ny fiangonana, hamitana ireo ezaka samihafa atrehiny, ny ampahany amin’ny vola azo amin’io fampisehoana io, raha ny fanazavana hatrany.